Services & Guarantee - AngelBiss Healthcare Inc.
AngelBiss ine yakakwana system nehunyanzvi sevhisi.
Pre-kutengesa sevhisi, isu tinopa zvinotsigira senge:
Vashandi veAngelBiss vanotsigira chero mibvunzo kubva kuchikumbiro chako chakakosha nezve zvigadzirwa, uyezve ndokukurudzira chaicho chako.
AngelBiss zvakare inopa muyedzo bvunzo pamberi pehuwandu hwehuwandu kana uchida.
* Wona yedu Fekitori
AngelBiss inogamuchirwa noushamwari kuti ishanyirwe.
Iine iyo inodzora Guarantee:
1.Chigadzirwa chine makore matatu akazara garandi.
-AngelBiss ichapa vatengi nezvipenga zvikamu (zvinosanganisira main board, compressor uye sieve mubhedha chete) kwemakore matatu akazara garandi mune imwe neimwe yekutumirwa pa2% yehuwandu hwakazara huwandu. Tanga nechipiri
gore richapindura pane zvikamu zvekutsiva mwero.
-Zvimwe zvikamu zvingave zviri kunze kwemutengi (nekuda kwekugadzirisa zvigadzirwa mukati menguva yewarandi) uye zvaizodiwa pakugadzira zvimwe zvigadzirwa zvaizotumirwa kumutengi naAngelBiss pa
zvaizotumirwa kumutengi mukati mekutakura kweguvhu mukati memazuva gumi nemana pamutengo weAngelBiss.
-Disposable zvinhu (semhepo firita, mask, nebulizer kits, cannula) hazvina kuvharwa mukati mevimbiso nguva. Zvimwe zvinhu zvinoraswa zvaizotumirwa kumutengi neAngelBiss pamutengo wemutengi.